China Fashoni yekupwanya mhepo / SH-920 fekitori nevatengesi | Xiyingying
Micheka Nyaya: Shell: 100% polyester 75D yekunyepera ndangariro; Muviri / hood lining: 100% polyester mesh; Sleeve lining: 210T taffeta
Zvishongedzo: Kwakavharwa nenyama tepi, Plastic zipi
Mashoko: Inoratidzira kudhinda, Laser gomba kumberi kwepaneru
Iyo yekuvhuvhuta mhepo ine anopfuura makore zana emakore nhoroondo yatove, uye ikozvino zvinoita sekunge inogona kumira muyedzo wenguva. Masitayera ayo uye micheka ine yavo yega yakasarudzika, iyo inogona kusiya yakadzika pfungwa mukutarisa; kushanda kwayo hakuenzaniswi, munguva yechando inotonhora uye kamwe kamwe inopisa, chinovhara mhepo chinogona kupfekwa ndokubviswa pamadiro zvisinei nemamiriro ekunze, anogona kukuperekedza kuenda kure kure, asi zvakare anogona kupfeka mumigwagwa nyore.
Makomba madiki ari kumberi uye hood haangoite kuti iwedzere kufema, asi zvakare inowedzera pfungwa yemafashoni. Uye zvakare, iyo tsvuku, chena, dema mavara anoenderana pamwe nguva dzose anoita kuti vanhu vanzwe zvakanaka nezvakaipa, hupenyu nerufu, kupenya kwezuva nemumvuri, ruzha nekunyarara, zvakanyanya uye zvinochengetedza. Kunyangwe aya mavara achipokana zvakanyanya, iwo zvakare ane zvisingataurike zvakajairika. Iko kushandiswa panguva imwe chete kwemakara anopesana musanganiswa usingarambike mukushandiswa kwemavara.
Kubva payakagadzwa, isu tinosimbirira pane yepamusoro manejimendi zano, rakanakisa chigadzirwa mhando uye nongedzo kune vebhizinesi neanoda musika pfungwa. Panguva imwecheteyo, isu tinoteerera zvizere kune nyowani masitayera ekuvandudza, tevera iwo maitiro ekudzora zvakanyanya. Iyo inofarirwa zvakanyanya nevatengi vatsva nevakuru kuti isu tinopa yekutanga-kirasi mhando, yakasarudzika mutengo, pane-nguva dhirivhari uye nehanya sevhisi zvichingodaro. Chigadzirwa chedu ndeche musika wepakati uye wepamusoro musika, uyo unotengesa mushe pasirese, senge Italy, Spain, Greece, Brazil, Philippines, UAE, Algeria zvichingodaro.
Yedu bhizinesi pfungwa ndeyekuti kugadzira runako uye kuwana kuhwina-kuhwina mushandirwi mudiwa pamwechete.
XIYINGYING inovhura moyo wayo, nekutendeseka vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire, tichava sarudzo yako yakanakisa uye zvakare wako waunodanana naye.
Pashure: Anotyora mukomana mukomana SH-916
Zvadaro: Bhachi rakapfekerwa bhachi SH-754
Polo yehembe yemukomana M-F373
Bhachi rakapfekerwa bhachi SH-766
Bhachi rakapfekerwa bhachi SH-1083
Bhachi rakapfekerwa bhachi SH-1085
Bhachi rakapfekerwa bhachi SH-1086
Hoodie yemukomana uye bhurukwa SH-985